Kooxaha Manchester United iyo Chelsea oo barbaro ku kala baxay, xilli De Gea uu galay qalad kale… + Sawirro – Gool FM
Kooxaha Manchester United iyo Chelsea oo barbaro ku kala baxay, xilli De Gea uu galay qalad kale… + Sawirro
( England) 28 Abriil 2019 kooxda Manchester united ayaa bar-baro 1-1 la dhaafi weyday Kooxda Bules kulan ka tirsanaa horyaalka Premier league.
qeebtii hore ee ciyaarta kooxaha Manchester United iyo Chelsea ayaa ku hishiiyey bar baro 1-1 wallow kooxda Manchester ay soo bandhigtay ciyaar aad loogu riyaaqay.
Manchester United ayaa Kulanka ku soo gashay dar dar aad u xoogan iyaga oona durba la yimid goolka koowaad ee ciyaarta waxaana u dhaliyey xidiga reer Spain ee Juan Mata kaddib caawin uu ka helay Show daqiiqadii 11-aad ee ciyaarta.
Gacan ku heenta kulanka intiisa badan waxaa heysay kooxda Manchester oo ka wanaagsaneed dhigeeda Bules balse nasiib daro qalad uu galay gool haye Devid De Gea ayaa qasbay in laga bar bareeyo goolka waxaana ka dhaliyey Alonso daqiiqadii 43-aad ee ciyaarta.
Kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad lagu kala nastay bar-baro 1-1, muddo kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambee ee ciyaarta oo aheyd mid aad u xiiso badan.
Markii dib la isagu soo laabtay qeebtii dambe ee ciyaarta ciyaartoyda labada dhinac ayaa sameeyey fursado halis ah oo gool loo filan karay balse midna kama faa’ideysan jaanisyadaas.
Ciyaartoyda kala ah Bailly iyo Rudiger oo kaka kala tirsan United iyo Chelsea ayaa loogu saaray ciyaarta dhaawacyo halis ah oo ka soo gaaray jilibka.
Ugu dambeen kulan ciyaareedkii u dhexeeyey Kooxaha Manchester United iyo Chelsea ayaa ku soo idlaaday bar-baro 1-1.
SAWIRRO XUL AH: Van Dijk oo loo Magacaabay laacibka sanadka ee Premier League, Sterling oo isna noqday laacibka da'yarta halka......